Umaki: wiley | Martech Zone
NgoLwesithathu, July 7, 2010 NgoLwesihlanu, Okthoba 23, 2015 Douglas Karr
Le yividiyo yesibili, enoChantelle Flannery, kumlobi wethu amavidiyo akhiqizelwe ukukhishwa kweCorporate Blogging for Dummies. Ngasekuqaleni kwanamuhla, sishicilele ividiyo yokuqala, nge Douglas Karr. Izinhloso zethu zamavidiyo nokufakwa kwawo kusayithi le-Corporate Blogging Tips kwakungukuthi: Sikhuthaze ukukhishwa kwencwadi, Ukubumbana Kwebhizinisi KwamaDummies. Thuthukisa indawo nokubhuloga kwezinkampani ku-Twitter naku-Facebook. Phromotha mina noChantelle sikhuluma futhi sifundisa izinkampani
Ukubhuloga Kwebhizinisi KwamaDummies: Ingxoxo ne- Douglas Karr
I-Rocky Walls neZach Downs abavela ku-Twelve Stars Media behlele ku DK New Media office futhi ngathwebula ividiyo kaChantelle nami ngamavidiyo ambalwa ebesifuna ukuwafaka kusayithi Lamaseluleko Wokubloga Okuhlangene. Lesi bekuyisikhathi esimnandi. Akukho okuqukethwe okwabhalwa futhi akuzange kuzilolonge. Sibuyekeze izinhloso zethu ngaphambi kokuthwebula: Thuthukisa ukukhishwa kwencwadi, Ukubhaliswa Kwebhizinisi KwamaDummies. Thuthukisa indawo nokubhuloga kwezinkampani
Okulandelayo ohlwini lokufundwayo (olunqwabelanisa ngempela) yi-Gravitational Marketing. Abantu abahle baseWiley bangithumelele iNcwadi Yokumaketha - kumele ngabe babonile ukuthi ngiyisincwajana sezincwadi Zokumaketha. Kulabo kini abagwema izincwadi zebhizinisi ezifana nobhadane kepha bathanda ukufunda ukuziphatha komuntu… yilokho engikuthandayo ngezincwadi Zokumaketha. Omunye wangibuza kanye ukuthi ngiyifundile yini iSociology. Ngicabanga ukuthi ngine-a